ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဖခင်ရဲ့ဆုံးမစကားကိုကြားယောင်ရင်း ၀မ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ မင်းသားနက္ခတ် – Cele Snap
ပရိတျသတျကွီးရေ…မငျးသားခြော နက်ခတျဟာဆိုရငျ MRTV-4 မှရိုကျကူးတငျဆကျနတေဲ့ဇာတျလမျးတှဲပေါငျးမြားစှာကို ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးမှာပီပီပွငျပွငျသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့အတှကျ ပရိတျသတျတှရေဲ့အားပေးခဈြမှုကို အပွညျ့အဝရရှိခဲ့တဲ့မငျးသားတဈလကျပဲဖွဈပါတယျနျော။သူ့ကို မငျးသားခြော နက်ခတျဆိုပွီး ပရိတျသတျတှရေငျရှိစခေဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှကေတော့ ထာဝရမန်တလေး၊ အရိပျ၊ ကြှနျတျောအမုနျးဆုံး ကြှနျတျော စတဲ့ဇာတျလမျးတှဲတှနေဲအောငျမွငျမှုတှရေရှိခဲ့တာပဲဖွဈပါ တယျနျော။
မငျးသားခြောနက်ခတျဟာဆိုရငျ အနအေေးသူတဈယောကျဖွဈပွီးအနုပညာလုပျငနျးတှကေို ကွိုးကွိုးစားစားလုပျကိုငျနတေဲ့ သူတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။နက်ခတျကခဈြစရာကောငျးပွီး အနအေေးတဲ့ခဈြသူခြောခြောလေးကိုလညျးပိုငျဆိုငျထားတာဖွဈပါတယျနျော။အခုလိုအောငျမွငျမှုတှရေရှိထားတဲ့နက်ခတျကသူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာကနတေဈဆငျ့ပရိသတျတှကေို ဝမျးနညျးဖှယျအကွောငျးအရာလေးတဈခု မြှဝလောခဲ့ တာပဲဖွဈပါတယျ။
အဲ့ဒါကတော့ “🙏🏻🙏🏻🙏🏻 13.5 .2021. 11:39pm ကနြျောခဈြ ရ တဲ့ အ ဖကေနြျောတို့ကိုထားသှားခဲ့ပီ အဖရေဲ့ဆုံးမစကား တှနေဲ့သားဘဝကိုအကောငျးဆုံး နထေိုငျပါ့မယျ။ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻…….” ဆိုပျွီါ စိတျမကောငျးစှာနဲ့ရေးသားလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။နက်ခတျရဲ့ဖခငျဆုံးပါးသှားခဲ့တဲ့အတှကျလညျးပရိသတျတှမြေားစှာစိတျမကောငျးဖွဈပွီး အားပေးစကားပွောနကွေတာလညျးတှရေ့ပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးတဲ့ပရိတျသတျတဈယောကျခငျြးစီတိုငျးကို အထူးပဲကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော…။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…မင်းသားချော နက္ခတ်ဟာဆိုရင် MRTV-4 မှရိုက်ကူးတင်ဆက်နေတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲပေါင်းများစွာကို ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက် ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးချစ်မှုကို အပြည့်အဝရရှိခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။သူ့ကို မင်းသားချော နက္ခတ်ဆိုပြီး ပရိတ်သတ်တွေရင်ရှိစေခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကတော့ ထာဝရမန္တလေး၊ အရိပ်၊ ကျွန်တော် အမုန်းဆုံး ကျွန်တော် စတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တာပဲဖြစ် ပါတယ်နော်။
မင်းသားချောနက္ခတ်ဟာဆိုရင် အနေအေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နက္ခတ်ကချစ်စရာကောင်းပြီး အနေအေးတဲ့ချစ်သူချောချောလေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုလိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့နက္ခတ်ကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာကနေတစ်ဆင့်ပရိသတ်တွေကို ဝမ်းနည်းဖွယ်အကြောင်း အရာလေးတစ်ခု မျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ် ပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ “🙏🏻🙏🏻🙏🏻 13.5 .2021. 11:39pm ကျနော်ချစ် ရ တဲ့ အ ဖေကျနော်တို့ကိုထားသွားခဲ့ပီ အဖေ့ရဲ့ဆုံးမစကား တွေနဲ့သားဘဝကိုအကောင်းဆုံး နေထိုင်ပါ့မယ်။ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻…….” ဆိုပြီါ် စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ရေးသားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နက္ခတ်ရဲ့ဖခင်ဆုံးပါးသွားခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပရိသတ်တွေများစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးအားပေးစကားပြောနေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးတဲ့ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်းကို အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်…။